100+ Erayo Qosol badan oo aad u badan tahay inaadan ogeyn inay yihiin qosol: Wararka Dugsiga Hada
100+ Erayo Qosol badan oo aad u badan tahay inaadan ogeyn waa qosol
Filed in Articles by Tifaftirayaasha TMLT Juun 18, 2021
Erayada qosolka leh waa lagu madadaalo in la dhaho. Markaad ka fikirto, ereyada qaarkood ee luqadda Ingiriisiga waxay u muuqan karaan kuwo xiiso leh. Markaynu nidhaahno "xiiso leh" runti waxaan ula jeednaa qariib iyo wacky. Laakiin haye, taasi waa waxa iyaga ka dhigaya madadaalo, sax?
Ereyo Qosol Leh
Kani waa ururinta ereyo qosol badan iyo macnahooda. Ku daadi erayadaada maalin kasta oo nolol maalmeedka ka dhig waxoogaa xiiso leh. Ku dar ereyga aad jeceshahay ee qosolka leh faallooyinka!
Marka haddii aad tahay qof jecel in ereyo doqon ah lagu daro wada sheekaysigaaga maalinlaha ah, waad nasiib badan tahay maxaa yeelay waxaan soo koobnay ereyo qosol badan waxaad bilaabi kartaa adeegsiga maanta oo ay u badan tahay inaadan waligaa maqal.
Hoos ka eeg eeg oo u diyaar garow inaad ereyo badan oo cusub oo maad ah ku darto ereyadaada.
Waxaad maqli kartaa awoowayaashaa iyo ayeeyadaada oo adeegsanaya ereygan qosolka badan oo loola jeedo jahwareerka ama wareerka
Tani waa waxqabadka orodyahannadu sameeyaan markay is beddelaan inta u dhexeysa orodka iyo orodka.
Kani maahan qoraal qoraal, waxaa loola jeedaa “had iyo jeer” ama “markasta.”
Waxaad u maleyn kartaa inay tani tahay nooc ka mid ah dhawaqa, laakiin dhab ahaantii waa eray macnihiisu yahay “dhul”.
Waxaad adeegsan kartaa ereygan markaad kahadleyso buuq.
Nasiib darrose, kani maahan cunto. Taabadalkeed, waa dhibic xab ah oo sanka ka laalaada qof.
Weligaa ma isweydiisay waxa loo yaqaan calaamadda loo adeegsaday kala-qaybsanaanta mushkiladda xisaabta? Hagaag, hada waad ogtahay!
Markuu qof sakhraamo, waad ku sifeyn kartaa adoo adeegsanaya ereygan nacasnimada ah.
Ereygan xiisaha leh waa erey kale oo ah "dallad."
Ku beddel erayga "giggle" ama "qosol" eraygan markaad rabto inaad qof ku qanciso.
Yaan lagu jahwareerin erayga "snicker," a "smicker" macnaheedu waa in si kalgacal leh loogu fiiriyo qof.
Kani waa erey macnihiisu yahay "jillaab weyn."
Waxaa laga yaabaa inaad iyada qof da 'weyn ugu yeerto qof dhalinyaro ah, oo aad ugu kalsoon qofkan ereygan dheer, ee jilicsan.
"Salopettes" waa eray loo isticmaalo in lagu sharaxo labo ka mid ah surwaal barafka lagu xidho oo garbaha laga xidho.
Tan waxaa loola jeedaa qofka buugaagta xada.
Tani waxay sharraxaysaa qofka wax cunaya / cabbaya inta ay jiifsanayaan - sidaas darteed asal ahaan qof kasta oo wax cunaya intuu daawanayo Netflix waa "ku-shubasho"
Ereygan wuxuu qeexayaa qofka isku dhex yaacaya oo sameynaya wax aan waxtar lahayn.
Qof kasta oo hadda baranaya alifbeetada waxaa loo gudbin karaa sidan - sidaas darteed aasaas ahaan dhammaan xanaanada carruurta. - Ereyo Qosol Leh
Qof eraygan ku adeegsanaya jumlad waxay u badan tahay inuu dhahayo waxaa lagu siray inay wax qabtaan.
In kasta oo ay taasi u ekaan karto sida magaca xayawaanka, haddana runti waa eray macnaheedu yahay "si xanuunsan quruxsan."
Markaad rabto inaad ka gudubto inaad ka naxday wax, waad isticmaali kartaa tan.
Haddii qof had iyo jeer aad uga welwelsan yahay sida lebiska uu u eg yahay, waxaad ku tilmaami kartaa "foppish".
Maya, kani ma aha nooc ka mid ah xayawaanka, dhab ahaantii waa jiheyn iyo macnaheedu waa wax la mid ah in la yiraahdo wax waa wax-culeys ka soo jeeda wax kale.
Ereygan waxaa loo adeegsadaa marka qof khibrad u leeyahay wax, badanaa u jeedka isticmaalka internetka ama ciyaarta fiidiyowga.
In kastoo dadku ay ugu yeeri karaan sumaddan hashtag (#), magaceeda dhabta ah waa "octothorpe."
Tani waa markaad kula hadlayso qaab qof aad isku dayayso inaad ku qanciso hab saaxiibtinimo iyo nolol leh.
Tani waa waxaad ugu yeeri laheyd qof ka baqaya inuu wax dhammeeyo.
Ha ku khaldamin tan 'Tyra Banks' eraygii soo baxay ee "dhoolla caddeeyay" "Smaze" waa waxa aad hesho marka ay isku jiraan qiiq iyo ceeryaamo.
Kani waa dhawaaqa qaylada, baroorashada ee baaruhu samaynayaan. Yaa ogaa?
Kani waa qaab quruxsan oo gaagaaban oo ah ereyga "la jeclaysto."
Intii aad odhan lahayd "hoogay!" waad dhihi kartaa eraygan goofiga ah.
Kani waa eray qosol leh oo macnaheedu yahay in wax u socdaan jihada qaldan / saacad-diidka.
32. Xaydha badan
Ereygan waxaa loola jeedaa lakab dufan badan oo dufan ah.
Tani waxay sharraxaysaa tiro shay ah, badiyaa cuntada.
Tani wax shaqo ah kuma laha kartoonada wax walbana waxay ku sameeyaan qurxinta iyo sida boos loogu qurxiyo.
Qofka aadka u gaboobay ee aan doonaynin inuu wax ku sameeyo isbeddellada casriga ah ayaa tan loogu yeeri doonaa. - Ereyo Qosol Leh
In kasta oo tani u muuqan karto sida cuntada guud, haddana dhab ahaantii macnaheedu waa isla erayga "gibberish."
Kani waa erey macnihiisu yahay "badaha la gooyey."
Waxaad u adeegsan kartaa ereygan markaad kahadleyso inaad yeelato iskudhaf waxyaabo kala duwan ah.
Kani wuxuu qeexayaa wax u eg inuu ku dhowaanayo inuu kala dillaaco.
Qofka ay dhib ku tahay go'aan qaadashada- yar ama weyn- waxaa lagu magacaabaa eraygan.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad gebi ahaanba wareersan tahay.
Haddii kale loo yaqaan qaylo-dhaan digniin ah.
Marka xigta ee aad calool xanuun yeelato, waad isticmaali kartaa ereygan.
Ereygan waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo luqad qalafsan.
Tan macnaheedu waa "ASAP."
Tani waa hilib raqiis ah.
Muuqaal dabeecad xumo ah.
Ereygan waxaa loo isticmaalaa markaad sifayneyso koox si wadajir ah farxad ugu qaylinaysa.
Tani waxay asal ahaan loola jeedaa luminta waqtigaaga.
50. Godka godkiisa
Tani waa waxa godka ku jira foostada ama sanduuqa aad ku shubeyso dareeraha dhexdiisa loo yaqaan.
Qof nacas ah oo aan masuul ahayn ayaa loo tilmaami karaa sidan.
Rumeyso ama ha rumeysan, kani waa magaca rootiga loo yaqaan 'koonfurta' ee loo yaqaan 'corn'.
Haddii aad rabto inaad sharaxdo wax jilicsan oo jilicsan, isticmaal tan.
Mid baa dhihi kara in loogu yeero qalad ciyaaryahanka kubbadda koleyga inta lagu guda jiro ciyaarta markay flop tahay waa sharci “namby-pamby” qurux badan.
Halkii aad ka dhihi lahayd "qashin" ama "knickknacks" gurigaaga, waxaad u adeegsan kartaa eraygan inaad dadka kale ugu sheegto inaad haysato walxo yaryar oo aan qiimo dhab ah lahayn.
Tani ma aha gabal dhar ah. Rumayso ama ha rumaysan, waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo dhawaqa laba shaqal marka ay isla socdaan, sida codka “oy” ee farxadda. -Erayo been ah
Kani waa erey kale oo lagu sifeeyo lallabbo.
Waxaad ku arki doontaa wax badan oo ka mid ah geedahan yaryar Australia iyo New Zealand.
Ilmo akhlaaq xumo leh ayaa lagu tilmaami doonaa ereygan.
Tani waa geedo leh madaxa ubaxa oo aad uxun.
Kani waa eray Yiddish ah oo asal ahaan ka dhigan "darawal kursiga dambe."
Tani waa waxa aad ugu yeeri laheyd qalab aalado casri ah iyo kumbuyuutar ah.
Waan ka xumahay ragga, laakiin ereygan waxaa loo isticmaalaa markaad ka hadlaysid nin loo bartay inuu cod yeesho ama la koolkooliyo. - Ereyo Qosol Leh
Waxaad ugu yeeri laheyd qof had iyo jeer ku labista dharka iyo dharka wasakhda leh tan.
In kasta oo eraygan u eg yahay inuu wax uun ku lahaan lahaa qosol, haddana runti waa eray loo yaqaan mindi dheer oo khatar ah.
Waxaad u isticmaali kartaa tan markii qof ku hadlayo hadal aan micno lahayn.
Tani waa waxa aad ugu yeerto eey oo ah isku darka gorgor iyo cirfiid.
Nope, kani ma samaysan. Waa maraq ka samaysan bur, khudaar iyo hilib digaag.
Waxaad u maleyn kartaa inaad u maleyneyso Jack Sparrow inuu ereygan u adeegsanayo inuu ku sifeeyo xubin ka mid ah shaqaalihiisa oo ahaa cunsur.
Marka qof ku hadlayo wax aan micno lahayn iyo ereyo aan micno lahayn, waxaad isticmaashaa eraygan.
Haddii aad tahay qof aan cabin aalkolo, markaa waxaa lagugu yaqaan "teetotaler."
Kani waa erey kale oo macnihiisu yahay "in la cararo."
Waxaad u badan tahay inaadan waligaa qiyaasi doonin, laakiin kani waa kuul yar oo dhululubo ah oo laga sameeyay qolofka la safeeyey.
Tani wax xiriir ah kuma lahan shahwadaada iyo dhab ahaantii wax walba oo lagu sameeyo fern yar oo ka soo baxa dhagxaanta iyo darbiyada.
Waxaad isticmaali kartaa ereygan marka xigta ee aad maqasho dhawaq aad u sareeya.
Ereygan waxaa loo adeegsadaa markaad rabto inaad sharraxdo in wax qof uu ka hadlayo yahay been ama ka badbadin badan.
Waxaad ereygan u adeegsaneysaa markaad rabto inaad tixraacdo shay ama rogrogmada.
Hadaad rabto inaad tiraahdo qof wuu baqayaa, adeegso ereygan bedelkiisa.
Tani waa biqil yar oo ka soo baxa xididka dhirta.
Markaad hilmaamto waxa shay la yiraahdo, waad isticmaali kartaa eraygan.
Ereygan waa mid aan caadi aheyn oo laga yaabo inuu u muuqdo been abuur, laakiin wuxuu ula jeedaa qof doqon ah oo hadal badan.
Ereygan wuxuu qeexayaa boodbood aad ku sameyso hawada markii aad leedahay gadaal gadaal gadaal iyo lugaha adag.
Tani shaqo kuma laha bixinta doofaarrada qubeyska. Waa eray aad isticmaasho marka qof rumaysto wax, sida khuraafaad, ay tahay been abuur.
Markaad rabto inaad isticmaasho erey macnihiisu yahay "waxba," isticmaal kan.
Qalabka afka lagu duubo ama nooc kale oo qalab dabayl ah oo la mid ah ayaa tan loo yaqaan.
Ereygan wuxuu u ekaan karaa doqon, laakiin waxaad u adeegsaneysaa inaad ku sifeyso qof aan saaxiibtinimo lahayn.
Miyaad rumaysan kartaa ereygan oo macnihiisu yahay "dabaylo xoog badan oo ku dhaca hareeraha meelaha dhaadheer?"
Dadka deggan Jasiiradda Sare ee Michigan waxaa loogu yeeraa naanaysta.
Kani waa qalab T-qaabeeya oo loo adeegsado in biyaha looga soo saaro dabaqyada iyo daaqadaha.
Tani waa waxa aad ugu yeeri laheyd shay ama qalab yar haddii aad ilawdo magaciisa dhabta ah.
91. Qol yar
Waligaa ma maleynaysid, laakiin tani waxay ka dhigan tahay u raridda rakaabka ama alaabada inta u dhexeysa laba meel oo isla waddan ah. - Ereyo Qosol Leh
Haddii wax “la sharraxay,” waxay ka dhigan tahay inay leedahay warqad afkeedu af duuban yahay oo gacanta lagu gooyay.
Ereygan waxaa aad loo adeegsaday 1870-yadii waxaana loola jeeday in lagu sharaxo dhawaqa daaqa ah ee dharka dhaadheer uu sameeyay.
Marka xigta ee aad aragto shirkad si aad ah isugu dayaysa inay kaga guuleysato macaamiil xayeysiin ah, waad u wici kartaa tan.
Tani wax xiriir ah kuma laha xayawaanka, laakiin taa macnaheedu waa inaad u adkeysatay wax.
Tani waa waxa aad ugu yeerto qof ku hor socda marka aad dad badan ku dhex jirto.
Tan macnaheedu waa isla ereyga "khiyaanayn."
Kani waa erey kale oo loo adeegsado in lagu tilmaamo qof khiyaano badan.
Tani macnaheedu maahan in qofku uusan qof dambe ahayn. Waa eray aad u adeegsato inaad ku sifeyso qof la tirtiray dhaqan xumo darteed.
Tani waa wax aan caadi ahayn.
101. Batrachomyomachy - Si aad buur uga sameyso mooliil.
102. Cattywampus - Nidaam la'aan, markii wax aan si sax ah loo hagaajin.
103. Flibbertigibbet - Flakey, qof hadal badan. - Ereyo Qosol Leh
104. Duurjoog - Caleemaha ku jira qoraal gacmeed.
105. Suuq - Si lama filaan ah uga tag.
106. Billingsgate - Luuqad qalafsan oo cay ka buuxdo.
107. Boggooy - Eray loogu talo galay buuqa calooshaadu qabato markay qayliso.
108. Gardyloo - Digniin ayaa lagu qayliyey ka hor inta aan biyaha ama qashinka kor laga soo tuurin.
109. Malarkey - Wax aan jirin.
110. Ratoon - Biqilka geedka dalagga.
ADIGA LAGUGU TALIYAY !!!
100 Farriimo Habeen wanaagsan oo qosol badan, Rajo, iyo xigashooyin
100 Rabitaan Sanadka Cusub oo Qosol badan iyo Farriimo Jacaylka
15 Meelood ee ugu Sareeya ee Carruurta ah ee ay Kartoonnada Qosolka Leh Khadka tooska ah uga daawadaan sanadka 2020
100 Farriimo Qosol Qosol Badan Saaxiibka Ugu Fiican 2021 Cusboonaysiinta
Iibso 15-kaan shay oo kaliya dadka reer Nigeria ayaa u maleynaya inay yihiin wax lagu qoslo
100 Rabitaan Ciida Kirismaska, Farriimaha, iyo xigashooyinka
111. Kaalay - Qaddar ama ciqaab uu qof mudan yahay.
112. Boustrophedon - Nooc qoraal qadiimi ah oo loo qoro midig bidix iyo bidix ilaa midig safaf kale.
113. Bowyang - Suunka surwaalka kor u qaada.
114. Faafida - Qaabka jirku u kala baxo markaad daasho ama hamaansato.
115. Yarborough - Gacan daciif ah oo ku jirta buundada qandaraaska.
116. Donnybrook - Dood kacsan.
117. Anencephalous - Maqnaanshaha dhammaan ama qayb ka mid ah maskaxda.
118. Snickersnee - Middi weyn.
119. Sialoquent - Ku buufin candhuufta intaad hadlayso.
120. Xertz - Inaad wax cabto ama wax cuntid si dhakhso ah ama hunguri.
121. Nincompoop - Doqon, qof aan waxtar lahayn.
122 Canoodle - Si aad u salaaxdo ama ugu dhowaato.
123. Godwottery - Qaabka guud ee hadalka ama beerta.
124. Gonzo - Saxaafad fog.
125. Cantankerous - Si xad dhaaf ah u dood ama wada shaqeyn la'aan.
126 Widderhins - Saacad saacad ka dib.
127. Wabbit - Erey xisaabeed la xiriira nooc diidmo ah weerar adeeg. - Ereyo Qosol Leh
128. Cockamamie - Aan macquul ahayn
129. Goombah - Saaxiib weyn, saaxiib dhow ama saaxiib.
130. Hobbledehoy - Qof dhalinyaro ah, oo jilicsan.
131. Hocus-pocus - Wax aan micno lahayn ama gacan taag ah.
132. Codswallop - Wax aan jirin.
133. Jirro-kala - DHAQSO BADAN.
134. Mollycoddle - In loola dhaqmo qof si koolkoolin ah.
135. Mugwump - Qofka ka fog ama run ahaan u madax bannaan arrimaha siyaasadeed.
136 kolloo - Jeex hilib la dubay.
137. Namby-pamby - Qof tamar iyo geesinimo la'aan.
138. Beelo - Carsaan.
139. Dabaysha - Garyaqaan liita oo dhaqamo shaki leh leh.
140. Rigmarole - Qoraal dheer, oo qaylinaya.
141. Collywobbles - Welwel iyo calool istaag. - Ereyo Qosol Leh
142. Shenanigan - Hawl khaldan.
143. Skedaddle - Si dhakhso leh uga bax
144. Udgoon - Caadi ahaan cillad-raadiyaha.
145. Kurbo - Inaad qof ku muquuniso gudbinta.
146. Snollygoster - Qof xariif ah, mabda 'aan laheyn.
147. Zoanthropy - Qofka aaminsan in ay isu beddeleen xayawaan.
148. Xaraashka - Miisaan fudud, qof ku bukooda isagoo cabbaya.
149. Doozy - Wax muuqda, caadi maahan.
150. Gubbins - Qaybaha kalluunka guud ahaan la tuuro oo aan la cunin.
151. Erinaceous - Wax u eg joonyado.
152. Xisaabin - Qof aan hadlin wax badan, ama gaar ahaan kooban marka ay hadlayaan.
153 Fard - Si xad dhaaf ah ayaa loo sameeyay.
154. Fatuute - Doqon iyo macno la’aan. - Ereyo Qosol Leh
155. Abibliophobia - Cabsida ka haysata inay ka dhammaato agabka akhriska.
156. Xusuusnow - Software rogaya sawirada ceeriin.
157. Daarood - In looga hadlo qaab dheer, sicir barar.
158. Fuddy-duddy - Qof duqoobay ama qaylo badan.
159. Dabaysha - Dallad.
160. Sumcad xumo - Si aad wax u leexiso.
161. Gobbledygook - Luqad aad u farsamo badan oo isku murugsan oo aan la fahmi karin.
162. Troglodyte - Qof ku nool god.
163. Cunto - Albaabka laga baxo ama laga baxo ee tiyaatarka ama tiyaatarka.
Luuqadda Ingiriisigu miyaanay ahayn mid gaar ah oo xiiso leh? Erayadu waa waxyaabo qosol badan.
Kaliya maahan sababtoo ah waxay mararka qaarkood u muuqdaan kuwo la yaab leh (safka, Waxaan kaa hadleynaa) ama asal aan caadi aheyn, laakiin sidoo kale maadaama ay da 'ahaan caadi yihiin ay naga dhigayaan qosol iyo qosol. Waa maxay fartlek? Ama a shivoo?.
Hagaag, Hadaad ka heshay akhrinta qodobkan, fadlan la wadaag freinds-kaaga, oo qosol fiican ka samee. Waxa kale oo aad hoos u dhigi kartaa faallo ku saabsan ereyga aad ugu jeceshahay.
Koorsooyinka iyo Shuruudaha UNIZIK | Liiska buuxa ee koorsooyinka la bixiyay
Qiyaasta Dhismaha iyo Dredge Works Nigeria Qorista Shaqaalaynta Xaddidan 2020/2021 Foomka Codsiga
Khidmadaha Dugsiga Jaamacadda Veritas 2020/2021 ee Ardayda Cusub iyo Soo Noqoshada
Pearson VUE Xarunta Imtixaanka 2019 ee Mareykanka iyo Faahfaahinta Xiriirka
Nidaamka Nadiifinta & Diiwaangelinta BSUM Freshers - 2016/2017
Sida loo hubiyo Isu dheelitirka Xogta Airtel 2021 iyada oo loo marayo SMS Arag Cusbooneysiintii Ugu Dambeysay
Tags: ereyo macno daro ah, ereyo qosol badan asxaabta, ereyo qosol leh maalinta, ereyo ama weedho qosol badan, ereyo qosol leh si aad wadahadal ula gasho, ereyo qosol leh oo si kadis ah loo dhaho, ereyo gaagaaban oo gaagaaban, ereyo gaagaaban oo gaaban oo la dhaho
« Sida looga takhalusayo Jiirka guriga si wax ku ool ah oo ku filan
Qorista Shaqaalaynta Difaaca Madaniga ah Musharax Xushan 2021/2022 Liiska buuxa ee PDF »